Shiinaha Waa maxay mootada laad ee loo isticmaalo warshadda iyo alaab-qeybiyeyaasha |Kooxda Huaihai Holding Group
Mootooyinka laad, sida baabuurta kale ee dhaqdhaqaaqa sida baaskiilada, hoverboards, iyo skateboards, ayaa helaya caan dheeraad ah oo dheeraad ah ma aha oo kaliya dadka magaalada deggan laakiin sidoo kale dadka doonaya labadaba gaadiidka ku habboon iyo wakhtiga firaaqada.
Qalabkan fuushanku waxa ay jireen horraantii 1920-kii, inkasta oo inta badan mishiinnada casriga ah lagu farsameeyo ganacsi ahaan, haddana dadka, gaar ahaan dhallinyarada dalal badan oo dunida saddexaad ka tirsan ayaa weli isticmaalaya agabka alwaaxa ah.Qalabyadani waxay inta badan leeyihiin alwaax jireed waxayna u isticmaalaan biraha sida giraangiraha.
Noocyada kala duwan waxay leeyihiin adeegsi gaar ah oo kala duwan oo maqaalkan, tani waa waxa aan ka hadli doono, markaa haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato mid, waxaa lagugu hagi doonaa si waafaqsan.
Noocyada mootada laad iyo isticmaalkooda
1.Nooca labada taayir
Mootada ugu caansan waa moodooyinka labada taayir leh.Waa muuqaalo caadi ah oo ay isticmaalaan dadka ka socda qaybaha kala duwan ee nolosha.Sababtoo ah alaabooyinkani aad bay faa'iido u leeyihiin gaar ahaan shaqada ama dugsiga, moodooyinka badankoodu waa laalaabin oo la hagaajin karo taasoo u oggolaanaysa isticmaaluhu inuu si fudud u qaado inta uu ku jiro tareenka dhulka hoostiisa ah ama marka uu baska raacayo.
Naqshadaynta labada taayir leh waa qaar ka mid ah raacitaanka ugu qaalisan, si sahlan loo isku dheeli tiro, waxayna aadi kartaa ku dhawaad ​​meel kasta.Mootooyinkan waxaa sida caadiga ah loogu talagalay carruurta ay da'doodu ka yar tahay 6 sano iyo dadka waaweyn waxayna badanaa leeyihiin miisaan 90kgs (220lbs).Qaar ka mid ah isticmaalka ugu caansan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn kuwan soo socda:
Waxa loo isticmaali karaa gaadiid maalinle ah oo lagu tago iyo ka soo kaxaynta dugsiga
U isticmaal gaadiid maalinle ah oo aad shaqada ku tagto iyo ka soo laabato.Tan waxaa lagula talinayaa gaar ahaan dadka qabanaya shaqooyin badan oo waqti-dhiman ah sababtoo ah ka wareejinta hal shaqo oo loo beddelo mid kale waxay noqon kartaa waqti-qaadasho haddii mid ka mid ah shaqadiisa kale ay u jirto dhowr baloog.
U isticmaal sida safarka firaaqada ah ee usbuuca iyo saaxiibbada iyo qoyska
Isticmaal markaad dhex wareegayso magaalada
Tusaalaha ugu fiican ee fuulitaankan laablaabanH851waa mid ka mid ah alaabooyinka ugu iibka badan oo aad caan ugu ah wadayaasha.
2.Wadada Kabaxsan/Dhammaan Nooca Dhulka
Nooca ka baxsan wadada wuxuu la mid yahay nooca caadiga ah ee 2-taayirrada ah, laakiin badanaa wuxuu leeyahay taayirro ka dhumuc weyn oo ka weyn oo ka samaysan caag.Waxay u dhiseen dadka xiiseeya dhiiqada iyo wasaqda.Aaladaha ka baxsan wadada ayaa inta badan ka culus oo leh fiimyo waaweyn oo ka xoog badan waxayna ka samaysan yihiin walxo ka adag sida birta daawaha ah ama aluminium heerka diyaaradeed.
Moodooyinka ka baxsan wadada looguma talagalin safarka maalinlaha ah maadaama ay ka culus yihiin oo ay adagtahay in la qaado.Dadka jecel inay dibadda u baxaan waxay isticmaalaan raacitaanka noocaan ah maalmaha fasaxa ama fasaxa.
Isticmaalka mishiinada ka baxsan wadada:
Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhex maro dhul adag sida saxaraha, dhoobada, wasakhda, ama meelaha dhaadheer.
Waxaa loo isticmaalaa madadaalo ee looma isticmaalo fuulitaanka magaalada caadiga ah
Waxay u isticmaalayaan tartamada wadista bannaanka
Ma qorshaynaysaa inaad iibsato safar ka baxsan wadada?Wax kale ha eegin aan ahaynTaxanaha H.Labada taayir ee ugu fiican ee ka baxsan wadada iyo kan ugu caansan ee raacayaasha wasakhda ah.
Dhammaan moodooyinka korantada laguma shaqayn karo laad marka batteriga la daadiyo, laakiin inta badan labada taayir ee korantada ayaa loogu talagalay inay socdaan xitaa batteriga la'aanteed.Noocyada korantada waxaa loo dhisay safarro raaxo leh oo dheer laakiin waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad qaadato markaad raacdo tareenka dhulka hoostiisa mara ama baska.
Sababta kale ee aad ku iibsan karto laad koronto ah waa marka jidkaaga maalinlaha ah ee dugsiga ama shaqada uu leeyahay qayb sare oo dheer.Waxaad ku laadi kartaa hoos laakiin hubaal waxaad isticmaali kartaa korka koronto.
Maxaa moodooyinka korontada loo isticmaalaa?
Socodka ugu raaxada iyo nasashada badan
Fogaan dheer iyo buuro aan sinnayn
Matoorka waxa la isticmaali karaa marka aad ka daashay laadista
Markaad sidaa tidhi, haddii aad go'aansato inaad iibsato nooc koronto ah, thetaxanaha Rwaa badeecada ugu fiican ee aan ku talin karo.
Nooca laadka pro sidoo kale loo yaqaan stunt, ama freestyle waa nooc gaar ah oo loogu talagalay stunts iyo bandhigyada jardiinooyinka barafka iyo tartamada.Qalabkani maaha qalabkaaga maalinlaha ah ee caadiga ah.Waxay yihiin mishiinnada ugu cimri dheer sababtoo ah waxaa loogu talagalay isticmaalka culus.Bal qiyaas inaad ka soo dhacayso 6 cagood oo bood ah oo aad dhulka ku soo degto adigoo weli ku kor saaran sagxada?Ma jiro qalab socon kara haddii aan loo dhisin inuu sii jiro.
Mootooyinka laadadka ah waxaa loo isticmaalaa:
Stunts iyo bandhigyo ku yaal jardiinooyinka skate-ga
Ma doonaysaa inaad iibsato nooc bilaash ah?Isku day Fuzion X-3– B077QLQSM1
Waqtiga boostada: Mar-01-2022